China DuoDuo Shopping Cart DG1015 With 3 Swivel Wheels & Mbughari Kanvas akpa emeputa na soplaya | Duoduo
DuoDuo Shozụ ahịa DG1015 Na 3 Swivel Wheels & Bag canvas akpa
Mepee ogo: 49x37x101CM
Nkata nkata: 32x29x39.5CM
N'ogige atụrụ size: 37x21x94CM
Ngwugwu: 8pcs kwa katọn
Nha katọn: 87x42x56CM
Nke a bụ ịrị arị ụlọ ịzụ, ọ bụ foldable na na akpa, nko na-agbanwe eriri, nkata nwere ike iwere si na isi nke ụgbọ, ọ ga-eji na dị iche iche iche iche nke ọnọdụ. Enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ abụọ dị iche iche. Ọ dị fechaa ma na-enye aka n'oge ndụ gị kwa ụbọchị.
Mfe steepụ ịrị imewe: Igwe ụkwụ atọ emere maka ikike ịrịgo steepụ. Cartgbọ ala na-agbago elu na mgbada na mfe. Wheels dị mma na ala dị ka apịtị, ahịhịa, steepụ, okwute, ihe, na gravel. Wheelkwụ dị n’ihu bụ wiilị zuru ụwa ọnụ, ogo 360 dị mfe ịtụgharị.
Cartgbọ ala ịzụ ihe bara uru nwere ike ịbelata ngwa ngwa: Eku ụgbọ ala ịzụ ahịa nwere ike ịkwatu dịka ibuga nnukwu ihe dị arọ. Isi nke ụgbọ ala ahụ na-agbakọkwa na-ekwe ka ụgbọ ala ahụ weghara ohere ka a na-echekwa ya.
Otutu na-eji ugbo ala ịzụ ahịa: A ga-eji ụgbọ ala a bara uru maka ọnọdụ dịgasị iche iche dịka ịzụ ahịa na ahịa ndị ọrụ ugbo, ahịa, nri, ebe obibi, ihe omume egwuregwu na ụlọ ahịa. A pụkwara iji trolley a na-ebuga akwa na-asa ákwà ma na-esi na ebe ịsa ahụ ma na-arụ ọrụ na gburugburu obodo. Ọ gụnyere otu eriri bungee maka nnukwu ibu dị arọ. ma nwee ike iburu 110lbs nke ibu mgbe ị na-adọta ngwongwo.
Unique imewe collapsible shooping ụgbọ: Collodion ahụ nwere a nkasi obi adịgide iji nyere gị aka elu ụlọ mfe na dịghị ekwe mgbe ị rịgoro steepụ. Shoppinglọ ịzụ ahịa nwere ikike 35L buru ibu nwere ike itinye mmiri, akwụkwọ nri, mmanụ oriri na ihe ndị ọzọ. Oké aluminum alloy mgbodo na abụọ aro na-eme ka ụgbọ ibu azụmahịa nwere ezi-achọ na-ewusi ibu. A na-agbanye ụkwụ ndị ejiri eri eri daa.
Nke gara aga: DuoDuo talọ oriri na ọ Tụ Tụ Trolley CC-S3S / CC-S3L 3 Tier Rolling Cart
Osote: DuoDuo ụgbọ ibu azụmahịa DG1026 / DG1027 nwere 360 ​​Celsius Rolling Swivel Wheels
Tszụ ahịa Customzụ ahịa
Zụ ahịa Foldable na Wheels
Kpọchi ụgbọ ibu azụmahịa
Obere ụgbọ ibu azụmahịa na Wheels
Cartzụ ahịa Maka Ndị Agadi
Ụgbọ ibu azụmahịa maka steepụ
Cartzụ ahịa na oche
Cartzụ ahịa na Wheels Swivel
Cartzụ ahịa ịre ahịa na Wheels
Ugboro abụọ Shozụ ahịa
DuoDuo Ewepụghị-panel cart HC150B / 250B Foldable Fla ...
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3015 Lightweig ...
DuoDuo Dolly-WG8006 Nrụgide oru Plastic Dolly wi ...
DuoDuo Ewepụghị-panel ụgbọ HC500S Dolly ịkpakọba Fol ...